सलमानले ५५ लाखको घर दिएको खबर बाहिरिएपछि रानु मण्डलले मुख खोलिन ! – दैनिक नेपाल न्युज
सलमानले ५५ लाखको घर दिएको खबर बाहिरिएपछि रानु मण्डलले मुख खोलिन !
एजेन्सी । सडकमा गीत गाउदै आएकी रानु मण्डल अहिले भारतमा निकै चर्चा कमाएकी छिन् । उनले पहिलो गीत तेरी मेरी गाएपछि सबैको प्रिय बनेकी हुन् । रानुले आफ्नो जीवन सडकको पेटिमा गुर्जादै आएकी थिइन् तर अहिले उनले भाग्य चम्केको छ । उनि कुनै सेलेब्रिटीको भन्दा कम छैनन् । केहि दिन पहिला उनले गाएको गीत सुनेर बलिउड नायक सलमान खान निकै भावुक बनेका निकै हल्ला फैलियो अझै कतिले त खानले उनलाई ई ५५ लाखको फ्ल्याट उपहार दिएको समाचार आएको थियो ।
तर वास्तवमा यो खबर साचो नभई झुटो भएको रानु आफैले नै खुलासा गरेकी छन्। उनले दिएको एक अन्तर्वामा एसको सनसनि पुर्ण खुलासा गरेकी छिन् । उनले आफुलाई सलमानले ५५ लाखको फ्ल्याट नदिएको बताएकी छिन् भारतिय मिडियाका अनुसार सलमानले घर दिएका भए मैले सबै सामु खुलासा गर्ने थिए । तर यो समाचार झुटो भएको रानुले बताएकी छिन् ।
उनलाई उक्त अन्तर्वामामा नै आफुलाई हिमेशले यहा सम्म ल्याएको र मलाई गीत गाउन मौका दिएको बताएकी छिन् । मैले गाएको गीत तेरी मेरी धेरै मानिसहरुले मन पराउन थाले। त्यसका लागि हिमेशजीलाई म धन्यवाद दिन्छु, आभारी छु भन्दै निरासता पन देखाएकी छिन् । हालै पनि उनलाई धेरै गीत गाउनको लागि प्रस्ताव आएका छन् ।
२२ वर्षिय सिलालाई सासु, ससुरा र पति मिलेर शरीरमा मट्टितेल छर्केर विभत्स हत्या गरे